Yintoni na imigaqo ubeko PCB sikarhulumente? - China Fastpcba Technology
Inkxaso Call 0755-26978877
Yintoni na imigaqo ubeko PCB sikarhulumente?
PCB ibhodi kweentambo yenye yezinto ezibalulekileyo abangakwaziyo ukusebenza. Kweentambo Pcb isekelwe phezu schematics zombane kunye netafile ucingo kunye efunekayo ucingo ububanzi kunye noyilo iiseli eshicilelweyo ucingo, iintambo zombane kufuneka ulandele ngokubanzi le migaqo ilandelayo:
1. Ngomhla ndawo yokwanelisa iimfuno zokusetyenziswa, indlela yokukhetha indlela iintambo yi umaleko ube mnye → maleko wokuqala → multilayer, oko kukuthi, iintambo kube lula.
2. Le uphawu kwi umaleko enye ibhodi Pcb itshintsha ulwalathiso kunye isithambeka okanye inguqu gingxi, kwaye embindini amagophe ungcono kancinane, ukuthintela electric xi endle, uphawu reflection kanye amanzi olongezelelweyo.
3. Le Ubeko kweentambo phakathi kwamagqabi ezimbini uxhulumaniso nelifutshane kangangoko kunokwenzeka, kunye nemiqondiso ezibuthathaka kunye nemiqondiso ezincinane ukuya kuqala. Ukunciphisa uphazamiso ukulibaziseka kunye nemiqondiso ezincinane. Ikhaka line isiseko kufuneka ibekwe ecaleni komgca igalelo le sekethe analog; ubeko umaleko umqhubi efanayo kufuneka ngokulungelelana zisasazwe. Le ndawo conductive kwi wire ngalinye kufuneka kakhulu ukulinganisela ukuthintela kwibhodi warpage.
4. iziphaluka Digital neziphaluka analog kufuneka ohlulwe kwi iintambo ukwenzela ukuba aphazamise omnye komnye.
5. Xa amacandelo wesiphaluka ebhodini Pcba ukuba nisekelwe siqhagamshelwe kubonelelo umbane, imizila kufuneka ube mfutshane kangangoko kwaye abe kufutshane kangangoko kunokwenzeka ukunciphisa uxhathiso lwangaphakathi webhodi pcb.
6. ubude I / O imigca eesekethe-high speed, ezifana kwiilayini eziphanda-phindiweyo I / O kunye yokukhulisa zahlula kunye yokukhulisa elungeleleneyo, linokulingana. Ukuthintela ulibaziseko olungeyomfuneko okanye kwisigaba shift.
7. nentwana kwi umaleko ngalinye lebhodi multilayer kufuneka aa Incopho na enye kwenye ukuze ukunciphisa nokuhlangana. Kuphephe ulungelelwaniso nokugqwesa nomphezulu zikhabane.
8. Xa pad edibene indawo conductive kwingingqi ezinkulu nezincinane, oko kufuneka zigqunyiwe kunye ucingo obhityileyo kunye ubude esingekho ngaphantsi kwe 0.5mm. kufuneka ibe ngaphantsi kwe 0.13mm ububanzi wire obhityileyo.
9. cingo ikufutshane ngohlangothi ibhodi yesekethe ezingamaphepha kufuneka ibe ngaphezu 5mm kusukwa webhodi yesekethe eprintiweyo. Ucingo isisiseko ibe kufutshane elunxwemeni lebhodi xa kufuneka. Ukuba kaloliwe sikhokelo elizakufakwa ngexesha lokulungiswa ibhodi yesekethe eprintiweyo, umgama phakathi ucingo kwaye ibhodi kufuneka ubuncinane ngaphezu ubunzulu kaloliwe sikhokelo.
FASTPCBA Technology Co., Ltd PCB umenzi eChina, Shenzhen. Kunye kweminyaka eli-14 uphuhliso, FASPCBA iba umenzi yokuqala iklasi ka-HDI PCB, ne imveliso 35,000 square meters.If ufuna ukufunda ngakumbi PCB , nceda uqhagamshelane: pcba06@pcb-smt.net
ixesha Post: Aug-27-2018